Indlu Eselunxwemeni - I-Airbnb
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguKrist
'I-Audacity Beach House' ibekwe ngokugqibeleleyo kwindawo engqonge iTropiki enolwandle oluzolileyo olunesanti kanye kumnyango wakho kwindawo ekhuselekileyo nenobubele ebantwaneni enombono omangalisayo phezu koLwandlekazi lweAtlantiki.
Ukuhlala kwindlu yolwandle ngamava ayingqayizivele; ukubukela ukutshona kwelanga ngelixa abalobi basekuhlaleni besa iiphenyane zabo elunxwemeni, njengoko bebuya kwimisebenzi yabo yasebusuku yokuloba. Okanye ukuzulazula kunxweme olungenasiphelo yindawo efanelekileyo yokuvumela umbono wakho weTogo ukuba uzike.
Ubomi kwindlu yolwandle ngamava akhethekileyo. I-Audacity Beach House yeyona ndawo ifanelekileyo yothando, iqhina losapho, amatheko omhla wokuzalwa okanye ukubaleka ngemithandazo kunye nokucamngca. Okona kubaluleke kakhulu, yindawo egqibeleleyo yokufunda incwadi!
Ungalibali ukutyelela "Indlu yekhoboka" imyuziyam ekufutshane malunga ne-7min yokuhamba ukusuka endlwini.
Ubomi bufutshane kakhulu kwaye ukuhlala kwindlu yaselwandle ngamava awodwa. I-Audacity Beach House yindawo efanelekileyo yothando, usapho / iqhina labahlobo, ukubaleka ngemithandazo okanye ukucamngca. Okona kubaluleke kakhulu, yindawo efanelekileyo yokuphumla nokufunda iincwadi.
Ungalibali ukutyelela "Indlu yekhoboka" imyuziyam ekufutshane malunga ne-7min yokuhamba ukusuka endlwini. Kukho iindawo zokutyela ezikufutshane nolwandle.
Umbuki zindwendwe ngu- Krist
Kukho umlindi wobusuku kunye nomnakekeli kwipropati oya kuphendula okanye ancede ngayo nayiphi na imiba enokwenzeka.